ဘာကြောင့်ကမ်းခြေ Cruiser စက်ဘီးတွေအတွက်ကောင်းပါသလဲ - စက်ဘီးစီး
အဓိက > စက်ဘီးစီး > သဲသောင်ပြင် Cruiser ဆိုင်ကယ် - ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတာ
သဲသောင်ပြင် Cruiser ဆိုင်ကယ် - ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတာ
ဘာကြောင့်ကမ်းခြေ Cruiser စက်ဘီးတွေအတွက်ကောင်းပါသလဲ
Cruiser စက်ဘီးမြို့တော်စီးနင်းခြင်းနှင့်အချို့သောအလင်းလမ်းကြောင်းလေ့လာရေးခရီးနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး အမျိုးသားဥယျာဉ်ဖုန်လမ်းကြောင်း hit ချင်လျှင်, aခိခိပိုကောင်းတယ်ဆိုင်ကယ်တစ် ဦး ထက်အလုပ်အတွက်ကမ်းခြေခရုဇ်။ အမြန်လမ်းနှင့်ကျောက်ခင်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးပေါ်တွင်အမြန်နှုန်း နည်း၍ သက်ရောက်မှုနည်းသောစီးနင်းမှုများအတွက်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်ဆိုင်ကယ်လမ်းများ။ဒီဇင်ဘာ 31, 2016
အိုး…ဟဲလိုဒီနေ့ငါတို့အားလုံးနိုးကြလိမ့်မယ်ငါတို့လမ်းလျှောက်ဖို့လာကြတယ်ငါလူးကပ်စနှင့်မာ့ခ်ဒိုက်ခ်မန်းတို့နှင့်အတူရှိနေသည်။ အဲဒီမှာစက်ဘီးအချို့ကိုဝယ်တော့ဈေးအပေါဆုံးဆိုင်ကယ်များနှင့်သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ အရှည်ဆုံးသောစက်ဘီးသည်လူးကပ်စမှဒေါ်လာ ၁၀၀ အနိုင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဝင်ပါစို့၊ Walmart ရှိဆိုင်ကယ်ဇုန်သို့သွားသည်။ ခရုဇ်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်။ $ 118 $ 118 အကြွင်းမဲ့ပျော်စရာကိုအခြားယောက်ျားတွေသာမြင်ခဲ့တာပေါ့။ ငါတို့ယနေ့ခေတ် Cruiser တွေဘယ်လောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်။ ဒါကအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံကိုင်သူတစ်ယောက်။ ဒါဟာလမ်းဘေးမှာသဲခုံကြီးကြီးမားမားပါ၊ ငါတို့နဲ့အတူငါတို့စီးနင်းလိုက်ပါမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Cruiser bikes Freeriding ကိုသွားမယ်။ ဒါပေမယ့် Kidson ရဲ့ bodyboards တွေကသူတို့ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးသူက“ ငါဒါကိုအရင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ငါသူတို့ကို rfen ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်စက်ဘီးကိုစီးကြစို့ငါ့ကိုလူးကပ်စနှင့်လူးကပ်စကထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည် အရှည်ဆုံးသောစက်ဘီးသည်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်အနိုင်ရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ လုပ် ဦး မည်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးတစ်လုံးလုံးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မည်မျှကြီးမားသည့်ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုမှလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ လာမည့်စိန်ခေါ်မှုအတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ဒီဆိုင်ကယ်ကိုဆိုင်မှာဆိုင်ကယ်စီးတာကလူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြတာပါ။ အခုဒီအနေအထားမှာအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့လှည့်စားမှုကခင်ဗျားရဲ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးဘီးတွေအားလုံးဘီးတွေလှည့်နေတုန်းပါပဲ။ အခုထိအလုပ်လုပ်နေတုန်းအခုဘီးကိုတကယ်စမ်းသပ်ပြီးကန့်သတ်ချက်တွေလုပ်မယ့်လှေခါးထစ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်။ ဒီကွာဟချက်ကကြီးမားတယ်ကွာဟချက်ကအရမ်းကြီးတယ်။ လူကောင်းတွေပါ။ ငါ့ပိုက်ဆံတွေကိုဖမ်းယူရမယ်။ ကြက်ဥတစ်ချပ်ကိုစီးပြီးငါတို့ခုတ်မောင်းနိုင်တဲ့နှေးနှေးရွေ့လျားနိုင်တဲ့foundရိယာကိုတွေ့ပြီ။ သင်ကပထမ ဦး ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ငါဟာဘီးတပ်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပိုက်ဆံခွဲလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနို့စို့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားကဒီဘုရားကိုစစ်ကြည့်လို့ပါ ပုရွက်ဆိတ် - နည်းနည်းစူးစမ်းလေ့လာသူနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းမှာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆုံမှတ်တစ်ခုနှင့်တူသည်၊ တကယ့်ကိုသာယာလှပသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနံရံသေးသေးလေးရှိတယ်၊ ၁၈၀ ကိုလုပ်ဖို့နံရံကိုမပြုလုပ်ခင်သူကိုယ်တိုင်တံဆိပ်ကပ်ပြီးသူအလိုတော်ပျက်သွားပြီ။ ဒါကြောင့်တကယ်တော့သင်ဟာဂိမ်းထဲကထွက်မလာသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Wallrideyes ကိုငါ့ဘောလုံးတွေပြန်ရွှေ့လာရင်ငါ့ဘားကပြိုကွဲသွားနိုင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါ့နတ်ဘုရားကဒီအချက်ကိုဆိုင်းဘုတ်တွေရဖို့ကြိုးစားနေသလား။ သူကကျွန်မကိုအားလုံးပေါင် ၂၀ ကျော်အလေးချိန် ၂၀ ပေါင်အလေးချိန်ရှိပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘီးကိုခေါက်လိုက်တယ်၊ သူကမော်ကွန်းဖြစ်မှာပေါ့၊ ငါတို့တက်ပြီးချက်ချင်းပဲငါ့ဘားကိုငါ့အရက်ဆိုင်တွေကိုကြည့်တယ်။ သူတို့ကငါတို့နောက်ကိုပြန်သွားတာအရမ်းနိမ့်တယ်။ သုံးယောက်ထဲမှတစ်ခုကဲ့သို့သွားပါ။ Oh, Ohohhoh သို့သွားပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏တုတ်များမှာကျွန်ုပ်၏တုတ်များသည်မမြဲပါ၊ ရွေ့လျားရုံသာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤစမ်းသပ်မှုလိုင်းသည်ပေါ်ထွက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သလား။ ကျနော်တို့နေ ၀ င်လာသည့်နောက်ဆုံးအချိန်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘဲလူးကပ်စသည်ရထားလမ်းထဲသို့ပြန့်ကျဲသွားလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘားများကိုကျွန်ုပ်ဘဝကိုအဆုံးတိုင်စေမည်ဟုကျွန်ုပ်အတိအကျမပြောပါ။ ငါ့ရဲ့နောက်ကျောကမ္ဘာကကျိုးပဲ့နေတယ်ထင်လို့မင်းဘယ်လိုထင်သလဲဒါငါ့ထံမှမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ထံမှမဟုတ်၊ လူလားလားသင်အဲဒီမြေကိုဆင်းလိုက်ရင်ငါ့အခြေကငါတို့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရမယ်ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးမိတယ်။ ဒါတောင်လူးကပ်စပါ။ ဒါကအနိုင်ရတာပဲ။ တကယ်တော့အရူးပဲ။ အိုဘုရားသခင်၊ မင်းမှာဒီလိုမျှမျှတတရှိမှု၊ သူကကြိုးကြိုးတစ်ချောင်း၊ အိုးဘုရားသခင်၊ ငါ ၁၀၀ ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ် ဒီနေ့ဟုတ်ပြီ၊ မင်းက Wallof အမြန်နှုန်းကိုထိမှန်တဲ့အခါမင်းရဲ့ထိုင်ခုံတွေချောပြီးလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။ အိုကေတို့လူးကပ်စ်ဆိုင်ကယ်ကိုလှန်လှောကြည့်လိုက်၊ တကယ်သေလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ အရူးပဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့တစ်ယောက်မှအနိုင်ရခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ၁၀၀ နောက်နှစ်ကျရင်ဥရောပကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးကတော့သင်ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုရင်သင်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါမှတ်ချက်အနည်းငယ်ချန်ထားပါ
အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ Cruiser ဆိုင်ကယ်
ကမ်းခြေ Cruiser ဆိုင်ကယ်သည်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ကောင်းပါသလား။
ပေါ့ပါးမှုတစ်ခုမှအကောင်းဆုံးကိုရယူရန်ကမ်းခြေခရုဇ်တစ်ရက်လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်သာမောင်းနှင်လျှင်ပင်နေ့တိုင်းစီးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျအပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်ရမသာဖြေရှင်းသည်သို့သော်သင်သည်သင်၏ကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ပေးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ထွက်ရနှင့်တစ် ဦး နှင့်အတူ fit မရကမ်းခြေဆိုင်ကယ် Cruiser။ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2017
ဟေ့ကောင်တွေ! တောင်တက်စက်ဘီးများ၏အရည်အသွေးနှင့်ပြိုင်ကားစက်ဘီးများကြောင့်ဟိုက်ဘရစ်စက်ဘီးများသည်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစီးနင်းမှုအခြေအနေအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုက်ဘရစ်စက်ဘီးကိုမြို့တစ်ဝှမ်းလှည့်လည်စီးနင်းနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းတွေပြိုကျခြင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စွယ်စုံဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်မြေမျက်နှာပြင်ကိုမဆိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည် ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်၊ သုတေသနနှင့်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဤစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုများကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်သူတို့၏အရည်အသွေး၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များနှင့်အသစ်ထပ်မံလိုအပ်ပါကဖော်ပြပါထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုသင်လိုချင်ပါကအောက်ပါဖော်ပြချက်အကွက်ရှိလင့်ခ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒီမှာအကောင်းဆုံးဟိုက်ဘရစ်ဆိုင်ကယ်ငါးခု
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ပဉ္စမမြောက်ထုတ်ကုန်မှာ Schwinn GTX ဖြစ်သည်။ Schwinn GTX သည်မတူညီသောလမ်းများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောစက်စပ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြစ်သည်။ GTX1.0, GTX 2.0 နှင့် GTX Elite ဟုခေါ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ် ၃ မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဘောင်ဆိုင်ကယ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ Schwinn GTX သည်ရှေ့လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်တပ်ဆင်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ယင်းသည်တာရှည်များကိုစုပ်ယူပြီးချောမွေ့သောစီးနင်းမှုကိုသေချာစေသည်။
Schwinn GTX သည်ခရီးသွားခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေချောချောမွေ့မွေ့လမ်းညွှန်မှုပေးသည်။ ၎င်းတွင် 700c ဘက်စုံသုံးတာယာများရှိပြီးနံရံနှစ်ဖက်ရှိအလူမီနီယံအကာများနှင့်ကောင်းမွန်သောလမ်းအသုံးပြုမှု။ Schwinn GTX တွင် linear ဆွဲဘရိတ်နှင့်ခိုင်မာသောဆိုင်းထိန်းစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဒါဟာရှေ့နှင့်နောက်ဘက်မှာစက်မှု disc ကိုဘရိတ်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင် ၂၁ မြန်နှုန်း Shimano ခလုတ်နှင့် Shimano နောက်ကျောလှေကားများလည်းပါရှိသည်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများမှာ - * မည်သည့်မြေမျက်နှာပြင်ကိုမဆိုအလွန်အစွန်းမရောက်အောင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ခရီးသွားခြင်းနှင့်အားကစားအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ နှင့် * ၎င်းသည်သာမန်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ထက် ပို၍ ပေါ့သည်။
သို့သော်ဆိုးကျိုးများမှာ - ခရီးရှည်အပြီးတွင်ထိုင်ခုံသည်မသက်မသာဖြစ်နိုင်သည်။ နှင့် * ၎င်းသည်လမ်းဘေးအလွန်အမင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းမှာမြန်နှုန်းနှင့်သွက်လက်ကမ်းလှမ်းတဲ့စက်ဘီးကိုရှာဖွေနေလျှင်, Schwinn GTX သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်စတုတ္ထထုတ်ကုန်မှာ Schwinn Network ဖြစ်သည်။
Schwinn Network သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ခရီးရှည်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးဖြစ်သည်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော်လည်းဤစက်ဘီးသည်ရှည်သောမြင်းစီးသူများအတွက်နေရာချထားရန်လုံလောက်သည် သင်သည်အလုပ်သို့သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအတွက်စီးနင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဤစပ်ဆိုင်ကယ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊
ဤစက်ဘီးသည်လျင်မြန်စွာညှိနှိုင်း။ လုံလောက်သောအရှိန်မြှင့်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ၂၁ မြန်နှုန်းရှိ Shimano EZ Fire shifter ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျောက်ခင်းထားသောလမ်းများ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့်တောင်ငယ်များတောင်မှမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဘောင်၊ ဘောင်အမြင့်များနှင့် linear ဆွဲဘရိတ်များကိုလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်း၏စွယ်စုံဒီဇိုင်းကမောင်းနှင်သူများအားမောင်းနှင်ရန်လွယ်ကူစွာမောင်းနှင်နိုင်အောင်လွယ်ကူစွာမောင်းနှင်နိုင်သည်။
Schwinn ကွန်ယက်သည် 700c တာယာများတပ်ဆင်ထားပြီး Shimano 21-Speed ​​Revo TwistShifter နှင့် Shimano နောက်ဘက်ရေယာဉ်များပါ ၀ င်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့စီးနိုင်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်ပါရှိသည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ - * ပင်စည်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအမြင့်၏မြင်းစီးသူရဲတက်ထားရှိရန်နိုင်ပါတယ်; တောင်တက်တာကိုပိုလွယ်ကူစေတယ်။ နှင့်အခြားစက်ဘီးများထက်ပေါ့သည်။ ဆိုးကျိုးများမှာ - * ထိပ်ပြွန်ကေဘယ်ကြိုးများသည်ကားစက်ဘီးစီးရာနေရာများတွင်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ နှင့် * ၎င်းသည်အလွန်လမ်းကြမ်းဝေးလမ်းများကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။ Schwinn Network ဖြင့်သင်သည်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအကျိုးရှိသောခရီးကိုခံစားနိုင်သည်။
၎င်းသည်အနီးအနားရှိစီးနင်းခြင်းများ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်သင့်နံနက်ခင်းသို့အသွားအပြန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောစက်ဘီးစီးစက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းထဲတွင်တတိယထုတ်ကုန်မှာဆဌမ reezero Pave n 'Trail ။ Pave n 'Trail သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်စုံသုံးမှုကိုရရှိသည်။
Vibrazord Front Suspension tuning fork နှင့် ၁.၇၅ လက်မကျယ်သောတာရှည်ခံနိုင်သည့်တာယာများပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤစက်ဘီးသည်အဆင်ပြေစွာစီးနင်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဗားရှင်း ၃ ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည် - ကွန်ယက် ၁.၅၊ ကွန်ယက် ၂ နှင့်ကွန်ယက် ၃၀ ။
အပန်းဖြေမှုအတွက်ဖြစ်စေ၊ အပန်းဖြေမှုအတွက်ဖြစ်စေဒီစက်ဘီးကသင့်ကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တည်ငြိမ်စွာစီးနင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်အမြန်နှုန်းနှင့်လျင်မြန်သောရွေ့လျားမှုအတွက်တိကျသောဂီယာလီဗာများပါ ၀ င်သော ၇ မြန်နှုန်းဂီယာရှပ်နှင့်လည်းပြီးပြည့်စုံသည်။ Pave n 'Trail တွင်တုန်ခါမှုနှင့်တုန်ခါမှုများကိုလျှော့ချပေးသော Vibrazorb ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
၁.၇၅ လက်မ slick တာယာများသည်ကျောက်ခင်းလမ်းတွင်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လျင်မြန်စွာလှိမ့်နိုင်ပြီးခိုင်ခံ့သောခြေနင်းသည်လမ်းကြောင်းမှဖုန်မှုန့်များကိုစုပ်ယူသည်။ ဒီပေါင်းစပ်စက်ဘီးမှာ ၂၁ မြန်နှုန်း Shimano ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
၄ င်း၏အားသာချက်များမှာ - * နေ့ချင်းညချင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ * ခရီးဆောင်အိတ်များကြောင့်လက်အိတ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်။ နှင့် * ဒါဟာလွယ်ကူပါတယ်။ ဆိုးကျိုးများမှာ - * တာယာများကိုကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားနိုင်သည်။ နှင့်သူ၏အတွင်းပိုင်းပြွန်တခါတရံ misaligned နိုင်ပါသည်။ Sixthreezero Pave n 'Trail သည်သင်စက်ဘီးစီးရန်ကြိုးစားသည်၊ အလုပ်စီးရန်၊ အလုပ်ရှုပ်ရန်နှင့်လမ်းမှားလမ်းကြောင်းများကိုပင်စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ဒုတိယထုတ်ကုန်မှာ Schwinn Discover ဖြစ်သည်။ Schwinn Discover သည်မတူညီသောနယ်မြေများကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်လူမီနီယံဘောင်နှင့်ချိန်ညှိနိုင်သောလူမီနီယံ crank စနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
တောင်တက်စက်ဘီးမဟုတ်သော်လည်း၊ ဟိုက်ဘရစ်စက်ဘီးသည်ခိုင်မာသောတည်ငြိမ်မှုရှိပြီး၎င်းသည်ကြုံတွေ့ရသည့်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤစက်ဘီးသည် ၂၁ မြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲကိုပေးထားပြီးသွက်လက်သောစက်ဘီးဖြစ်အောင်သင်ကအလုပ်များသောမြို့ကြီးလမ်း၊ ကြမ်းတမ်းသောရှုခင်းများ၊ Schwinn Discover သည်ပြန့်ကျဲခြင်းနှင့်ကျောက်တောင်ထူထပ်သောမြေအနေအထားကိုကိုင်တွယ်နိုင်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဒီဟိုက်ဘရစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုစီးနင်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်စက်ဘီးစီးနေစဉ်ကားမောင်းခြင်းကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတွင် ၂၁ မြန်နှုန်း SRAM ဆုပ်ကိုင်ပြောင်းလဲမှုလီဗာ၊ အလွိုင်းလှည့်လည်ချုပ်ကိုင်မှုပုံစံနှင့် Shimano နောက်ကျော derailleur gear ဂီယာအုံလေယာဉ်ရှိသည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ - * ၎င်း၏အကာအရံသည်ကားမောင်းသူအားအမှိုက်နှင့်ခြစ်ရာများမှကာကွယ်ပေးသည်; * ဒါဟာကျယ်ပြန့်ဘာသာပြန်ထားသောကမ်းလှမ်း; * ၎င်း၏ချိန်ညှိပင်စည်အားလုံးအရွယ်အစားမြင်းစီးသူရဲထားရှိနိုင်ပါတယ်; နှင့် * ၎င်းသည်ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
သို့သော်ဤစပ်သောစက်ဘီးသည်အတော်လေးလေးလံသည်။ သင်ကစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးသောမြေနေရာများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောစက်ဘီးတစ်စီးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Schwinn Discover သည်သင်မှီခိုနိုင်သောဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်တစ်ကိုမပေးခင်၊ ဤပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏နောက်ဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ၊ သင်ထွက်ရှိသောအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အညီနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိုပါကစာရင်းသွင်းပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်စပ်စပ်ဆိုင်ကယ်သည် Sixthreezero EVRYjourney ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ Sixthreezero EVRYjourney သည်သာမန် Cruiser ဆိုင်တစ်စီးနှင့်တူသည်။ သို့သော်အနီးကပ်စစ်ဆေးမှုတွင် ၂၅၀ ဝပ်ဝပ်နောက်ဘီးမောင်းမော်တာတပ်ဆင်ထားသည့်ဟိုက်ဘရစ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် modal နှစ်ခုကိုအထောက်အကူပြုသည် - နင်းအထောက်အပံ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝရှိသည်။
လမ်းပေါ်တွင်စက်ဘီးကိုအပြည့်အဝ ၂၄ ကီလိုမီတာအထိအမြန်နှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ နင်း၏အကူအညီဖြင့် ၄၈ ကီလိုမီတာ / တစ်နာရီအထိတက်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ pedaling နေစဉ် motor ကိုလည်ပတ်စေသည်။ နောက်ထိုင်ခုံတွင် ၂၅၀ ဝပ်ဝပ်ဘက်ထရီကိုအားသွင်း။ ၁၅ မိုင်အထိအားအပြည့်သွင်းနိုင်သည်။
EVRYjourney သည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဆန်ဆန်စီးနင်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဟိုက်ဘရစ်နှင့်ကမ်းခြေခရုဇ်အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစက်ဘီးကို ၁.၉၅ လက်မအကျယ်တဝက်ချောမွေ့တာယာတွေနဲ့လူမီနီယံအဆင့်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်တပ်ဆင်ထားသည်။
စက်ဘီးစီးနေစဉ်ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းကွဲပြားမှုအတွက် ၁ မြန်နှုန်း၊ ၃ မြန်နှုန်း၊ ၇ မြန်နှုန်းနှင့် ၂၁ မြန်နှုန်းတို့နှင့်ကွဲပြားသောအချိုးအစားရှိသည်။ သင့်အားသင်သွားလိုသည့်နေရာသို့အလျင်အမြန်မြန်လွန်း။ မနှေးကွေးဘဲရနိုင်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့စီးနင်းဖို့ညာဘက် cadence အတူ။ EVRYjourney စပ်စက်ဘီးသည် ၂၆ x ၂ လက်မအရွယ်အစားရှိသော Semi-slick တာယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ၇ မြန်နှုန်းရှိ Shimano Tourney နောက်လှည့်ယာဉ်နှင့် ၇ မြန်နှုန်း Shimano Index Revo Shifter ရှိသည်။
တချိန်တည်းမှာပင်အရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်ဘရိတ်များအပြင်ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ရွှံ့ကာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၄ င်း၏အားသာချက်များမှာ: * ၎င်းတွင်အမျိုးမျိုးသောဂီယာများရှိသည်။ ရွေးချယ်မှု; * ဖုန်မှုန့်များနှင့်ခြစ်ရာများထွက်ခွာရန်အကာအရံရှိသည်။ နှင့် * ၎င်းကိုအသွားအပြန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်လမ်းဘေးအလွန်ဝေးကွာသောနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်မသင့်လျော်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နေ့စဉ်ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်စီးနင်းရန်အတွက်စက်ဘီးတစ်စီးကိုရှာဖွေနေသည်နှင့်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းအနည်းငယ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်၊ sixtyreezero EVRYjourney စပ်သောအီလက်ထရောနစ်စက်ဘီးသည်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးစပ်စပ်ဆိုင်ကယ်ငါးခုအတွက်ပါ။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်လင့်ခ်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်ကိုကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးဖို့မှတ်ချက်ထားခဲ့ဖို့သတိရပါ။ ဒါအခုပဲ။
ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကူညီပေးပါက ကျေးဇူးပြု၍ 'Like' နှင့် 'Subscribe' ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။ လာမယ့်ဆောင်းပါးတွေမှာတွေ့ရမယ်
Schwinn Cruiser ဆိုင်ကဘာလဲ?
ဤရွေ့ကား retro- ရှာဖွေနေစက်ဘီးပူပြင်းသည့်တာယာကျယ်များ၊ ထိုင်ခုံကျယ်များထား ရှိ၍ သင့်အားဖြောင့်မတ်သောနေရာတွင်ထားပါ။ တစ် ဦး ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခိခိစက်ဘီးစီး: အဂန္လိုပဲSchwinnSting-Ray တစ် ဦးခိခိတည်ငြိမ်မှုကိုရှာဖွေနေသောပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်စတိုင်ကျသည့်စက်ဘီးစီးသူအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်။
Schwinn သို့မဟုတ် Huffy စက်ဘီးများသည်ပိုကောင်းပါသလား
နှစ်ခုလုံးချစ်သူနှင့်Schwinnသူတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ချစ်သူအများကြီးပိုတတ်နိုင်သည်Schwinn, အမှတ်တံဆိပ်တစ် ဦး အောင်ပိုကောင်းပေါ့ပေါ့စက်ဘီးစီးဘို့ရွေးချယ်မှု။ သို့သော်Schwinnဒါကြောင့်အောင်, အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားသည်ပိုကောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ် avid biker များအတွက်ရွေးချယ်မှု။မတ်လ 15, 2021
စက်ဘီးစီးရုံနာရီဝက်ပဲလုပ်နိုင်ကူညီကြပါမင်းမင်းရဲ့အားထုတ်မှုကိုအခြေခံပြီးရာနဲ့ချီတဲ့ကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်။မင်းလုပ်နိုင်တယ်အလုပ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးနံနက်သို့မဟုတ်ညနပေိုငျး၌၎င်း,မင်းစက်ဘီးစီးနိုင်တယ်ရန်လုပ်တယ်အချို့သောအမှုများ။ မသာလိမ့်မည်မင်းကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလုပ်မလုပ်တော့ပါမင်းဓာတ်ငွေ့တွေလည်းသက်သာလာမယ်။ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆
အဘယ်ကြောင့် Cruiser မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဤမျှစျေးကြီးတယ်?Cruiser မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ရပြီစျေးကြီးအတိတ်ကာလ၌သူတို့၏လူကြိုက်များမှုနှင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားကိုပြု၏။ ၀ ယ်လိုအားများပြားလာခြင်းကဈေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်။
စက်ဘီးစီးရုံနာရီဝက်ပဲလုပ်နိုင်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အခြေခံ၍ ရာနှင့်ချီသောကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်အလုပ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီး, ဒါမှမဟုတ်သင်နံနက်သို့မဟုတ်ညနပေိုငျး၌စက်ဘီးစီးနိုင်ဘူးရန်လုပ်တယ်အချို့သောအမှုများ။ သင်သည်ကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးသင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပျက်စီးစေရုံသာမကဓာတ်ငွေ့ကိုလည်းသက်သာစေသည်။ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆
Schwinn Cruiser ဆိုင်ကယ်ကောင်းပါသလား
Schwinn- မှတစ်ခုဖြစ်သောအကောင်းဆုံး Cruiser ဆိုင်ကယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
Cruiser စက်ဘီးနှစ်သိမ့်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်Schwinnအချို့ကိုစေသည်အကောင်းဆုံး။Cruiser စက်ဘီးတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ဘီးများကျယ်။ ကတ္တရာလမ်းများနှင့်သဲတစ်လျှောက်ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်များအတွက်သူတို့ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2017
စျေး၊ အခြေအနေ၊ အသက်၊ ရှားပါးမှုနှင့်ပုံစံ၏လိုလားမှုအပေါ် မူတည်၍ သိသိသာသာကွာခြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စပျစ်သီးကိုSchwinnပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သည့်လေအေးသည်ဒေါ်လာ ၇၀ သာကျသင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ် ဦး 1920Schwinnမူလဆေးသုတ်ထားသော Excelsior သည်ဒေါ်လာ ၉၀၀ အထိရောင်းချနိုင်သည်။
မည်သည့် ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ Cruiser ဆိုင်ကယ်နည်း။
Sixthreezero ၏အမျိုးသမီးကမ်းခြေခရုဇ်စက်ဘီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ကမ်းခြေခရုဇ်စက်ဘီးများသည်စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းရှိအကောင်းဆုံး Cruiser စက်ဘီးများဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သည့်ကောင်းမွန်သောအရာများနှင့်ကိရိယာများဖြင့်သင်၏ sixthreezero ကမ်းခြေခရုဇ်စက်ဘီးကို Accessorize ။ လှန်လှောခြင်းတောင်းထဲ၌ပေါ်လာပါ၊ သင်၏စက်ဘီးကိုနောက်စက်ဘီးဖြင့်တပ်ဆင်ပါသို့မဟုတ်သင်၏စက်ဘီးတွင်ခေါင်းလောင်းတပ်ပါ။
ကွေးကောက်နေသည့်ရသဗေဒနှင့်အဖြူရောင်နံရံကပ်ထားသောတာယာများသည်ကမ်းခြေသို့မဟုတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိ Urban ကိုထင်ရှားစေသည်။ ကွေးသောသံမဏိပြွန်များမှတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်ဘောင်သည်မျက်စိနှင့်စွဲမြဲနေသောကွေးနေသောဒီဇိုင်းရှိပြီးကျယ်ပြန့်။ ကွေးသောလက်ကိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးသည်ကမ်းခြေခရုဇ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်တက်ယူ, Schwinn ကော်ပိုရေးရှင်းလျင်မြန်စွာ 'Schwinn Cruiser' ဖြန့်ချိ 1977 ခုနှစ်တွင်တရားရုံးတွင်အမှုနှင့် McNeely နှင့်အတူအခြေချ။ Huffy ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများသည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်။ လှိုင်းတံပိုးကိုဖမ်းမိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်များအချို့၏ဗားရှင်းများကိုယနေ့တိုင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။